Ufuna iqembu elisha owayegijima kwiKaizer Chiefs | News24
Ufuna iqembu elisha owayegijima kwiKaizer Chiefs
Cape Town – Lowo owayengumdlali weKaizer Chiefs, uTinashe Nengomasha, uthungatha iqembu elisha, ngemuva kokuzithola engasadlaliswa kwiMpumalanga Black Aces.
Lo mdlali owazalelwa eZimbabwe, osenobuzwe baseNingizimu Afrika, wajoyina i-Aces ngesizini edlule esuka kwiBidVest Wits, kanti uqale kahle kuleli qembu, kodwa ngemuva kokushintsha kwabaqeqeshi, sekubukeka sengathi izinsuku zakhe sezibaliwe.
Utshele iSport24 ukuthi yena ufuna ukudlala ibhola nje kuphela, yingakho ebheka iqembu elisha.
Funda nalolu daba: USono uthi ngeke awuthathe manje umhlala phansi
"Imilenze yami isavuma futhi ngiyathanda ukudlala ibhola,” kusho uNengomasha.
“Ngiyazi ukuthi bengingasadlali kwi-Aces ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, yingakho ngifuna elinye iqembu manje.”
“Ngimatasa ngizilolonga ngedwa okwamanje njengoba isizini isavaliwe, futhi kuyangisiza ukungigcina ngisezingeni elifanele ukudlala.”